Homeसमाचारझन् कडा बनिन् रामकुमारी झाँक्री, ओलीसँग कुनै हालतमा झुक्दैनौँ (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 12, 2021 admin समाचार 5573
एमाले नेता रामकुमारी झाँक्री अहिले राजनीतिको चर्चा’मा छन् । उनका कडा अभिब्यक्ति कहिले वि’वादित हुन्छन् भने कहिले तरंग उ’त्पन्न गर्छन । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लिएर दिएको वि’वादित अभिब्यक्तिका कारण प’क्राउ समेत परेकी थिइन् । तर पनि उनी कडा अभिब्यक्ति रा’ख्न छोडेकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुँदा सचिवालय देखि केन्द्रीय स’दस्य हुुुँँदै तल्लो निकायका अलावा संसदीय दलसम्म अल्प’मतमा थिए । अहिले नेकपा एमाले ब्युँति’एपछि ओली केन्द्रीय समिति र सं’सदीय दलमा बहुमतमा छन् । तर, पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा ओली अल्पम’तमा छन् ।
नेकपा एमाले गठ’न भएपछि ओलीले अहिलेसम्म पदा’धिकारी देखि केन्द्रीय कमिटी मात्र नभई संसदीय दलको पनि बैठक डाके’का छैनन् । उनले बैठक नडा’क्नुमा माधव नेपाल पक्षधरबाट हुनसक्ने सम्भा’वित चुनौ’ती पनि कारण हो ।
यसैबीचमा सर्वो’च्चको फैस’ला पछि एमालेमै रहने निष्क’र्षमा पुगेको माधव नेपाल स’मुहका नेता रामकुमार झाँक्रीले फेरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर वि’रोध गरेकी छन् । उनले ओलीलाई तह लगाएरै छो’ड्ने बताएकी छन् । उनले आफ्नो संसद पद छो’ड्नु परेपनि ओलीको गलत कार्यशैलीको वि’रोध गरिरहने बताएकी छन् । – इताजा खबरबाट
पशुपतीनाथमा यसपालिको शिवरात्रीमा बाबा जी हरुको यस्तो रुप (भिडियो सहित )
तीन बच्चाले गाएको नेपाली गीत इन्डियामा भाइरल भएपछी, अभिनेता अनुपमले स्टाटस नै लेखेर यस्तो भने
April 11, 2021 admin समाचार 5688
बलिउड अभि’नेता अनुपम खेर सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छन् । उनी आफ्नो फ्यान्स माझ चर्चा’मा रहिरहन पछिल्लो समय रोचक पोस्ट गरिरहन्छन्। अनुपमको बच्चाहरुसँग खास लगाव छ र उनी सामाजिक सञ्जालमा बच्चाहरु’सँग सम्बन्धित पोस्ट गरिरहन्छन्। हालै
ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
September 5, 2020 admin समाचार 13903
ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् चितवनमा तीन हप्ता’देखि जारी निषेधाज्ञा’ले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजार’सम्म नपुग्दा मासुको मूल्य’मा गिरावट आएको छ । पोल्ट्रीको राजधा’नीका रुपमा परि’चित चितवन’बाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा
April 14, 2022 admin समाचार 727
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228482)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227448)